Archive du 20200304
Rodoben’ny mpanohitra « Ravao ny CENI sy ny HCC »
Namoaka fanambarana manoloana ny fanambaran’ny CENI tamin’ny herinandro izay nilaza fa misy 1.162.512 ireo olona manana kara-panondro roa samihafa omaly ny avy eo anivon’ny Rodoben’ny Mpanohitra ho an’ny Demokrasia eto Madagasikara (RMDM).
Antoko Otrikafo « Andao ravana ny CENI »
Tsy zava-baovao teto amin’ny firenena ny tsy fahatomombanan’ny fifidianana, hoy ny avy eo anivon’ny antoko politika Otrikafo.
Thierry Rakotonarivo – CENI Nisy nandrahona, saika nosamborina ?
Ny zoma 28 febroary teo no nanao tatitra ny CENI ka nampivoaka ireo tarehimarika niteraka resabe ka tonga hatrany amin’ny fitakiana fanafoanana ny fifidianana rehetra natao ny taona 2018 sy 2019.
Miakatra ny maripana politika Hovaina miaramila ny praiminisitra ?
« Tsy ny fanoloana praiminisitra ho miaramila no vahaolana Atoa Filoha fa mitoera tsara aloha dia manaova fandinihana lalina.
Fitondrana Rajoelina Miharatsy ny fandehan-javatra
Misy lanjany goavana ara-politika iny raharaha lisi-pifidianana sy kara-panondrom-pirenena miverin-droa iny. Nifoha daholo ireo hery politika nahatsiaro tena ho lasibatra tamin’ny fifidianana.
Depioten’i Befotaka Niaro mafy ny CENI
Izaho dia depiote lany tamin’ny fifidianana 2018 ary raha nijery ny fifidianana tany aminay dia nahita fa 1 na 2 no isan’ny « doublon » ao anatin’ny distrika iray,
Tale Jeneralin’ny Hetra sy ny Fadintseranana “Tsy idiran’ny resaka politika ny raharaha Claudine sy Mbola Rajaonah”
Mahakasika ny fakan’ny Fanjakana ny entan’ireo mpandraharaha, Razaimamonjy Claudine sy Mbola Rajaonah dia nanamafy ny Tale Jeneralin’ny Hetra sy ny Fadintseranana,
Thb Champions League Malagasy 2020 Fifaninanana Andro faha-2 anio
Miditra amin’ny andro faha-2 anio alarobia 4 martsa 2020 ny fifaninanana baolina kitra « Thb Champions League Malagasy 2020
Ando Niaina Herimahefa - Rugby Hiatrika ny tetikasa “bourses de leadership Exécutif 2020”
Fantatra izao araka ny vaovao nampitain’ny Malagasy Rugby fa hotohizan’ny World Rugby “Federasiona iraisam-pirenen’ny taranja rugby” ny tetikasa
Tsapao indray ny hery e !
Na tsy mitsotra ny marina aza dia tena tojo fahasahiranana ny fitondram-panjakana tarihin’ny filoham-pirenena Andry Rajoelina.
Ben’ny tanànan’Alasora Zava-dehibe ny fifanomezan-tanana
Tsy handraraka ilo mby an-doha eo anatrehan’ny fanomezan’ny vahoaka fitokisana azy hitantana ny kaominina Alasora ny Ben’ny tanàna Jimmy Randriantsoa, araka ny fanamby nomeny.
Lelavola kirakiraina eto Madagasikara Maro loatra ary betsaka ny very
Raha ny tamin’ny herintaona fotsiny dia na miliara maro ny vola very noho ny fikirakirana vola betsaka loatra, hoy ny minisitry ny Toekarena sy ny Fitantanam-bola, Richard Randriamandrato.
Tsy fisian’ny asa Voatery miharitra ny tsy rariny ireo mba manana asa
Notanterahina teny Antaninarenina, iray volana lasa izay, ny atrikasa nandinihana ny lalàna lasitra mifehy ny mpiasa an-trano sy ireo mpiasa mila ravinahitra any ivelany.
Elidio Randrianjafy « Aoka tsy ho tratry ny vela-pandrika politika ny mpampianatra ! »
Tsy misy maharatsy ny fitakiana nataon’ny mpampianatra namana, hoy ny mpanolotsaina teknika eo anivon’ny minisiteran’ny fanabeazam-pirenena,
Anosy manamorona ny RNM Efa tena lasa tsenabe
Efa tena lasa tsenabe ny eo Anosy manamorona ny fefin’ny Radio nasionaly Malagasy amin’izao.
Ankazotoho Anosizato Nitokona ireo mpitondra cyclo posy
Nitokona avokoa ireo mpitondra cyclo posy mampitohy an’Ankazotoho sy Anosizato omaly maraina.
AMPASIKA Saika matin’ny fitsaram-bahoaka ilay lehilahy namono zazavavy kely
Lehilahy 28 taona no voasambotry ny polisin'Itaosy sy ny BC3 ny alahady 1 martsa teo tokony ho tamin'ny 8ora sy 30mn alina teny Ampasika rehefa namono ny zana-badiny vavy kely iray.
LTI Alarobia Nitokona ny mpampianatra
Vavahady nikatona, tsy nisy mpianatra anatin`ny efitrano fianarana, nangina ny tokotanin-tsekoly omaly teny amin`ny lisea teknika Alarobia (LTI).
Tambin-karama tsy voaloa Tezitra ny PASEM, sekoly maromaro no mety hikatona
Manome 72 ora ny minisiteran’ny fanabeazam-pirenena indray nanomboka omaly talata ireo mpampianatra mivondrona ao anatin’ny
MPIASAN’NY PMU Mahatsiaro voafitak’ireo mpampiasa azy, mitaky ny zony
Mahatsiaro tena voafitak’ireo mpampiasa azy feno ireo mpiasan’ny PMU miisa 800 nahazo fampitam-baovao fa mandeha sômazy teknika mandritra ny 3 volana raha mampidi-bola ara-dalàna izy ireo isan’andro.
Japon Manamafy ny fifandraisana amin`i Madagasikara
Hanohana ny fitondram-panjakana mahakasika ny fampandrosoana firenena ny governemanta japoney.
Herisetra Tratra teny Ivandry ilay tovolahy nandaka ny filahian-drainy
Tovolahy 21 taona indray no voasambotry ny polisy miasa ao amin'ny BC3 teny Morarano/Ivandry ny alahady 1 martsa teo tokony ho
Polisim-pirenena Misafo anelakela-trano amin’ny alina
Tsy andro atoandro ihany no miditra any anaty elakela-trano ny polisy fa amin'ny alina koa dia tena manamafy ny fidinana ifotony any anaty tanàna izy ireny.
Fanafihana Cashpoint teny Isotry Jiolahy iray nalefa eny Tsiafahy
Lehilahy iray 25 taona no voasambotry ny polisy miasa ao amin'ny BC3 ny 25 febroary teo teny amin’ny faritra 67ha noho ny resaka fanafihana mitam-piadiana. Raha tsiahivina,
Rakotovao Vyvato “Tsy safidy ny fampivoarana fa fanapahan-kevitra”
Notanterahina omaly talata 3 martsa tao Antsirabe ny lanonana fametrahana tamin’ny fomba ofisialy ny governora vaovao, Rakotovao Vyvato.
Tarika Spesialista Hiverina amin’izay
Hiverina ary hiova endrika kely ny tarika Spesialista na The specialist teo aloha, raha ny fanazavan’i Hugues Randrianasolo na Gahu, mpitendry Kabosy sy mpihira ao amin’ny tarika.
Jimmy Hilarion Rakotonavony « Menatra amin’ny maha izy azy ny Malagasy. »
Mandroso manaraka toetrandro ny zavakanto eto Madagasikara, hoy ny mpanakanto sady mpikaroka momba ny mozika, Jimmy Hilarion Rakotonavony na Lejim 415.